Momba anay - Wuxi Qianduo Packaging Technology Co., Ltd.
Ny tavoahangy Hdpe sy PET dia ampiasaina amin'ny famonosana vokatra fikarakarana ara-pahasalamana, sakafo ara-tsakafo, famenon-tsakafo, kapsily, pilina ary takelaka, tavoahangy kosmetika no ampiasaina amin'ny famonosana crème, menaka latex, sns.
Wuxi qianduo fonosana teknolojia Co., Ltd. dia mirotsaka amin'ny tavoahangy plastika famonosana plastika ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana ho an'ny orinasa famokarana matihanina, ny orinasa dia manarona faritra 28000 metatra toradroa, velarana 16000 metatra toradroa, izay atrikasa manadio kilasy 100000 6000 metatra toradroa , ny fenitry ny endrika faritra feno trano fitehirizana feno 6000 metatra toradroa, fikarohana sy fampandrosoana ary foibe fanaraha-maso kalitao manarona faritra 300 metatra toradroa.
Ny tavoahangy Hdpe sy PET dia ampiasaina hanangonana vokatra fikarakarana ara-pahasalamana, sakafo ara-tsakafo, famenon-tsakafo, kapsily, pilina ary pilina. Ny tavoahangy kosmetika dia ampiasaina amin'ny famonosana crème, menaka latex, sns. Manome serivisy OEM ihany koa izahay, toy ny fanaovana bobongolo vaovao sy ny pirinty fanontana ho volavolain'ny mpanjifa.
Manana ekipa fitantanana kalitao sy varotra matihanina matihanina, eo am-pivoarana, manome ho an'ny mpanjifa ankapobeny ny vokatra avo lenta, fanohanana ara-teknika tsara, serivisy aorian'ny fivarotana tonga lafatra, manana laza tsara, kalitao azo antoka, vidiny mirary, hahazoana ny maro an'isa ny mpanjifa vaovao sy taloha dia deraina tsy tapaka, lasa tavoahangy plastika fonosana fanafody, ny mpitarika indostrialy. Amin'ny alàlan'ny fikatsahana sy ny ezaka tsy manam-paharoa ataon'ny olona, ​​misimisy kokoa ireo orinasa fanta-daza mahalala antsika ary mametraka fifandraisana fiaraha-miasa maharitra miaraka aminay.
Manaraka hatrany ny fahamarinan'ny kolontsaina qilu izahay, amin'ny mpampiasa ho ivon'ny soatoavina faratampon'ny kolontsainan'ny orinasa maoderina, miaraka amin'ny fitondran-tena kendrena, miaraka amin'ny fampivoarana ny firaisankina, manatsara ny kalitao amin'ny fanavaozana, manangana tanjaka amin'ny kolontsaina, mandeha mafy amin'ny lalan'ny ny indostrian'ny fahasalamana, amin'izao fotoana izao dia manana PE, PP, tavoahangy PET, vy UV sandoka, desiccant, labeling sns sy sehatra maro hafa.
Manokana amin'ny fanomezana serivisy tsara kokoa, vidiny ambany
Miarahaba anao izahay hiara-miasa aminay.